Na-achọ ịtọgbọ ala PVC na ụlọ akwụkwọ ọta akara? -News-Topflor China amachi
Echiche:62 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2019-06-03 Mmalite: Saịtị
Ebe obibi nke ime ụlọ dị ka ụmụaka dị ezigbo mkpa maka mmepe anụ ahụ na nke uche nke ụlọ akwụkwọ ọta akara. Dị ka ebe ụmụaka ga-akụzi ihe, mụọ ihe, bie ma nwee obi ụtọ, ụmụaka na-etinye oge ka ukwuu na ụlọ akwụkwọ ọta akara, yana n'ihe ịchọ mma nke ụlọ akwụkwọ ọta akara, ala na-atọgbọ Mpaghara ahụ buru oke ibu, yabụ nhọrọ nke ala ụlọ akwụkwọ ọta akara dị ezigbo mkpa. Anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọta akara gburugburu anyị ahọrọla PVC ụlọ. N'ihi gịnị?
Childrenmụaka nwere ume siri ike, dị ka ịwụ elu na ịrị elu, ịgba ọsọ na ịda ada na ụlọ akwụkwọ ọta akara bụ ihe ndị nkịtị. Mgbe ụfọdụ ha nwedịrị ike ịgba ụkwụ, jiri aka ha metụ ala. PVClọ PVC nwere ezigbo nkwanye ọkụ, nke nwere ike imechi ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma mee ka nwatakịrị ghara ịdaba na oyi; PVC ala A na-edozi elu ya ka ọ rụọ ọrụ nke mmetọ, mmetọ nje na-arụ ọrụ, mmịpụta nke ụzarị ultraviolet, mmụba nke ọma, igbu oge ịka nká na ịdị ọcha dị mfe; ya enweghị ntụpọ splicing technology na-eme ka o sie ike zoo unyi ma belata unyi na onuete nke ala, mbenata Ohere nke ịbụ nke nje na nje na-eme ka ahụ ike nke nwa ahụ.
Floorlọ ụlọ akwụkwọ ọta akara PVC nwere arụmọrụ skid mara mma, nke na-eme ka o siere ụmụaka ike ịbanye n'ala na mmiri mmiri; Ezigbo ihe ndozi na ịmịkọrọ mmiri na-eme ka ohere ụmụaka nwere ịdaba n'oge mmemme belata belata mmebi nke ụmụaka na-arụ ọrụ. Nyere ndi nkuzi na ndi nne na nna aka meputa obi uto na ezi uto ebe umuaka gha abanye n'ogige a.
N'anya ụmụaka, ụwa mara mma, ụfọdụ agba ọgaranya na-adọta ha mgbe mgbe. Enwere ike iji ụlọ PVC mee ihe na agba dị iche iche, ma nwee ike ịhazi ya na usoro dị iche iche na LOGO iji mepụta ama egwuregwu ụmụaka pụrụ iche.